Isazihola phambili i-ANC ngemiphumela yokhetho – LIVE Express
Imiphumela yakamumva yokhetho lohulumeni basekhaya isakhomba ukuthi iqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC) lisawahola phambili amanye amaqembu yize noma ukubalwa kwamavoti kungakaphothulwa ezweni lonke.
iNingizimu Afrika ibibambe ukhetho lohulumeni basekhaya ngoLwesithathu kanti umbango wokuhola amawadi kanye nomasipala abahlukene ubushisa phansi kumaqembu ezepolitiki kanye nabangenele ukhetho ngokuzimela.
Ngokwemiphumela yakamumva ezweni lonke, uKhongolose yiwona obonakala udla umhlanganiso ezindaweni eziningi njengoba uhlezi ku-10 870 812 (53%) wamavoti, izihlalo eziyi-2 291 kanye nomasipala abangama-85.
i-Democratic Alliance (DA) iyona esalandela isibili yize noma kunegebe phakathi kwayo ne-ANC ngokwezibalo zasezweni lonke. i-DA ithole u-27.41% wamavoti, izihlalo ezingama-771 kanye nomasipala abayi-18.
i-Inkatha Freedom Party (IFP) ithole u-4.85% wamavoti ezweni lonke, izihlalo ezingama-226 kanye nomasipala abahlanu. Leli qembu lithole ukwesekwa okukhulu KwaZulu Natali kanti kubukeka engathi lihlomule kakhulu ngokuhoxiswa kwe-National Freedom Party (NFP) ekungeneleni ukhetho.
Iqembu le-Economic Freedom Fighters (EFF), beliqala ukungenela ukhetho lohulumeni basekhaya kanti ngokwezibalo zakamumva lihlezi ku-7.4% wamavoti, izihlalo eziyi-163 kanti okwamanje awukho umasipala elisawunqobile.
Ukubalwa kwamavoti kusaqhubeka ezweni lonke kanti abalelwa ngaphezu kwa-85% amavoti asebaliwe ezweni lonke njengoba kulindeleke ukuba kuphothulwe ukubala ngempelasonto.
Image: IEC results screenshot
Angeke ingene okhethweni iNFP: inkantolo